Study muUkraine - Educational system in Ukraine. Educational process
The wokuUkraine hurongwa dzidzo provides excellent quality and is well developed. Chimwe chezvinhu zvinokosha mabasa nokuda nechepakati uye nemakanzuru zviremera ndiko kupa vakaenzana zvaangaita rokuziva pamusoro dzidzo yepamusoro nokuti zvose Vagari muUkraine.
Pane 15000 pakuchengetedzwa gadziriro pre-chikoro. Maererano Constitution yokusekondari anotora musimboti mugove munyika uye vakasununguka uye zvikuru pautsi. 7 millions of students attend 21900 zvikoro. Private kwemauto muna dzidzo hwechipiri ndihwo vasingakoshi. pamwe chete, pane 200 voga zvikoro (1% zvose uwandu vadzidzi).
Kuchinja kwezvinhu yokusekondari kubva 10 (11) kuti 12 chechetere hurongwa, maererano ne European mitemo, kuri kuitika iye zvino. Uyezve, hapana musiyano pakati zviri Ukrainian (post-yeSoviet) zvesekondari kubva mitemo yokusekondari dzimwe nyika dzokuEurope.
You can take vocational education in 950 technical institutions on the base of lower secondary education and upper secondary education. In Ukrainian hurongwa Education College Uyezve Education rinoreva yepazasi chikamu dzidzo yepamusorosoro.
Kuva kupfuura 1 miriyoni, mudzidzi muzvikoro yepamusoro muUkraine vanoumba hurongwa iyo inokurukura kuti kuva mumwe guru munyika. In Ukraine unogona kuwana dzidzo yepamusoro mu Africa (zvikoro, Institutes) abvumirwa pamusoro 3-4th chechetere. pashure 4 makore vachidzidza unogona kuwana Bachelor dhigirii, 5 Makore ari pava-, mashanu nehafu kana 6 Makore Masters Degree. Pakati zvose dzezvikwata zvataurwa madhigirii nyanzvi ndiyo inonyanya kufarirwa.
Yepamusoro kosi dzidzo kunosanganisira basa kupinda muzvikoro, apo vadzidzi vane mukana wokuwana ruzivo. Kuziva zvinodiwa yawana ndiyo yokutanga cheHurumende. In case of successful graduation of a university students get the. Diploma no matter what form of property it refers to. The inopangidza pamusoro penyaya zvawanyora mavanga wanamatira kuti Diploma. Kunyange zvazvo mamiriro runovimbisa zvinodiwa nemitemo zvinodiwa, ari mushandirwi anofunga sei chiremera kuyunivhesiti is.Today, you can get the education in 290 mumayunivhesiti, zvikoro uye Kudya rweUkraine pamusoro 3-4th pamwero accreditation. Pakati pavo pane 220 hurumende nemasangano, 70- asiri mamiriro.
vadzidzi International kuwana dzidzo yavo yepamusoro mu Africa, zvikoro uye Kudya dzisina chete abvumirwa, asi vanewo rinokosha rezinesi kudzidzisa vadzidzi vokune dzimwe nyika. Vose mumayunivhesiti kubva mazita Ukrainian Munopinda Center possess the license. Bazi Education uye Science rweUkraine Kutonga kunaka mabasa edzidzo zvaitirwa vadzidzi vokune dzimwe nyika.
vadzidzi International kutanga kudzidza avo nheyo gore.
Rinosanganisira mararamiro wokuUkraine (ChiRussian) mutauro uye vamwe nzwisisika nyaya maererano neramangwana basa racho. Uyezve dzidzo iri kuramba pamwe Ukrainian vadzidzi. ( Chirungu svikiro Munogonawo Zvisinei)
Last update:25 Chikumi 19